I-China L-Isoleucine CAS 73-32-5 yeeFarma Grade (USP / EP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
I-Pharm kunye neZongezelelo zeZithambiso
I-L-Isoleucine CAS 73-32-5 yeBakala yePharma (USP / EP)
Igama leMveliso: L-Isoleucine
CAS NO.: 73-32-5
Inkangeleko: ziikristale ezimhlophe okanye i-crystalline powder
Iimpawu zeMveliso: Ukukrakra kwincasa, Ukunyibilika emanzini kunye nokunyibilika kancinci kwi-ethyl alcohol, Indawo yokunyibilika: 284 ℃.
Ukupakisha: 25kg / ibhegi, 25kg / igubu okanye ngokwemfuneko yoMthengi
Igama lemveliso:: L-Isoleucine
I-L-Isoleucine (Isifinyezo se-Iso) yenye ye-18 yee-amino acid, kunye nenye yee-amino acid ezisibhozo emzimbeni womntu. Ibizwa ngokuba yi-branched chain amino acid (BCAA) ene-L-Leucine kunye ne-L-Valine ngokudibeneyo kuba zonke zinekhonkco lecala le-methyl kulwakhiwo lweemolekyuli.
I-L-Isoleucine yenye yee-amino acid eziyimfuneko ezingenakwenziwa ngumzimba kwaye yaziwa ngokuba nakho ukunceda unyamezelo kunye nokunceda kulungiso nasekwakhiweni ngokutsha kwezihlunu. Le amino acid ibalulekile kubakhi bomzimba njengoko inceda ukonyusa amandla kwaye inceda umzimba ukuba uphinde kwakhona kuqeqesho.
Iziphumo ze-L-Isoleucine zibandakanya ukulungiswa kwemisipha kunye neleucine kunye nevaline, ukulawula iswekile yegazi, kunye nokubonelela ngezicubu zomzimba ngamandla. Ikwaphucula imveliso yehomoni yokukhula kunye nokunceda ukutshisa amanqatha e-visceral. La mafutha angaphakathi emzimbeni wangaphakathi kwaye awunakwetyiswa ngokufanelekileyo kuphela ngokutya kunye nokuzilolonga.
L- Isoleucine inokukhuthaza ukuhlanganiswa kweprotein kunye nokuphucula inqanaba lokukhula kwehomoni kunye ne-insulin, ukugcina ibhalansi emzimbeni, kunokunyusa ukusebenza komzimba, ukunyanga ukuphazamiseka kwengqondo, ukukhuthaza ukonyuka kwesidlo kunye nendima yokulwa neanemia, kodwa kunye nokukhuthaza ukukhutshwa kwe-insulin. Isetyenziselwa amayeza, ukutya, ukukhusela isibindi, indima yesibindi kwimetabolism yemetabolism kubaluleke kakhulu. Ukuba ukusilela, kuya kubakho ukusilela ngokwasemzimbeni, njengemeko yesiqaqa. I-Glycogenetic kunye ne-ketogenic amino inokusetyenziswa njengezongezelelo zesondlo. Ukufakwa kwe-amino acid okanye izongezo zesondlo ngomlomo.
Eyona mithombo yokutya il-Isoleucine ibandakanya irayisi emdaka, iimbotyi, inyama, nut, isidlo seembotyi zesoya kunye nokutya okugcweleyo. Kuba luhlobo lweamino acid ebalulekileyo, oko kuthetha ukuba ayinakwenziwa emzimbeni womntu kwaye ifunyenwe kuphela kukutya.
Ujikelezo oluthile [a] D20
Ujikelezo oluthile [a] D25
icacile kwaye ayinambala ≤BY6
Isinyithi esinzima (Pb)
Ezinye iiamino acid
ukungcola komntu ngamnye0.5% ukungcola okupheleleyo2.0%
Intsalela kwi ucinezelo
Ukucoceka kwezinto eziphilayo
Egqithileyo I-L-Threonine CAS 72-19-5 yeBakala yeParma (USP)
Okulandelayo: L-Threonine CAS 72-19-5 kwiBanga lokutya (FCC / AJI / USP)
Izongezo zokutya zeGlycine
L-Threonine Pharm kwiBakala
L-Threonine Pharm kwiBakala, I-L-Valine 72-18-4, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Ukutya kwezilwanyana, L-Threonine kwiBakala lokutya,
U-Hebei Honray Imp. & Ex. Co., Ltd ..
Umnxeba:0086-139 3310 4395
Lwedilesi:Igumbi le-1-1-2103, inombolo ye-549 yesitalato i-Taihua, isixeko saseShijiazhuang, e-Hebei, e-China